(Turin) 23 Luulyo 2019. Wargeyska “Mondo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Juventus ay u soo bandhigtay Paris St Germain dalab aad u xoogan, si ay ula soo wareegaan xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Neymar Jr ayaa doonaya inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona, balse Paris St Germain ayaa ka go’an inaysan ka iibinin naadiga reer Catalonia xiddigan, waxayna taasi badalkeeda doonayaan inay u fasaxaan midkood kooxaha Juventus ama Real Madrid.
Sida lag soo xigtay Wargeyskan kooxda Juventus uu hogaaminayo tababare Maurizio Sarri ayaa waxay u muuqdaan kuwo si xoogan u xiiseenaya inay lasoo saxiixdaan xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr.
Hadaba Kooxda Bianconeri ayaa lagu soo waramayaa inay dalab u gudbisay dhigeeda Paris St Germain si ay kaga qaato 27 jirka reer Brazil ee Neymar.
Dalabka ay Juventus u dirtay kooxda Paris Saint-Germain si ay kala saxiixato Neymar Jr ayaa ah inay u wareegaan xiddigaha Paulo Dybala iyo Blaise Matuidi dhanka naadiga reer France lagu daray lacago aad u badan.
Liiska xiddigaha ugu mushaarka badan waqtigan kubadda cagta oo la soo saaray… (Kaalintee ayey kaga jiraan Ronaldo iyo Messi?)